Telefoonkan iPhone 6 Plus ayaa ka badbaaday 54 maalmood badda hoosteeda | Wararka IPhone
Mararka qaar xiddiguhu way isla jaanqaadaan oo waxyaabo aan caadi ahayn ayaa dhaca. Waxa caadiga ah ayaa ah haddii aan ku weyno iPhone-kiina badda dhexdeeda, waan la socon doonnaa rajada ah inaan mar labaad gacmaheena mar uun ku helno. Dhab ahaantii taasi waa waxa halyeeyga sheekadan u maleynayay ... Isagoon taas ogeyn, 54 maalmood ka dib markii baddu liqday aaladdii uu jeclaa, mar labaad ayuu la joogi lahaa.
Runta ayaa ah in sheekadu aysan si gaar ah u xiiso badnayn. Waxay ku saabsan tahay shaqsi, sida kuwa kale oo badan, fasax ula galay iPhone-kiisa iyo ilaaliye ka ilaalin doona inuu biyaha ka nabad galo. Hal dhibic, intii lagu jiray kayak, mawduuca ayaa ku dhacay biyaha oo la socda, iPhone 6 Plus. IPhone-ku wuxuu ku jiray boorso aan biyuhu ka soo lulmayn oo ka laadlaada suun qoorta u sudhan, laakiin si uun markii uu ka soo baxay biyaha ayuu siibtay oo badda ku dhacay.
In kasta oo ay isku dayeen inay helaan isaga markii uu burburka dhacay ka dib, haddana waxay noqotay wax aan suurtagal ahayn. Iyada oo ay la soo gudboonaatay xaaladdan, waxa ugu macquulsan ee saaxiibkeen nasiib darrada ah uu sameyn karay ayaa ahaa inuu dhaqaajiyo habkii lumay ee iPhone-ka, xitaa isagoo aan rajo ka qabin inuu waligii soo ceshto taleefanka casriga ah. Maxay ahayd layaabkaagu markii, 54 maalmood dhacdada kadib, waxaad heshay digniin ogeysiis ah in taleefankaaga iPhone-ka uu mar kale daarnaa.
Sheekadu waxay ku soo gabagabeyneysaa kulan saaxiibtinimo oo u dhexeeya qofka arkay bacda ay ku jirto iphone-ka inta uu quusayo iyo milkiilaha asalka ah, oo layaabkiisu aad u fiicnaa markii uu arkay in bacda difaaca ay shaqadeeda si fiican u qabatay, oo aan u oggolaan dhibic biyo ah inta lagu jiro bishaas ama sidaa darteed iPhone-ku wuxuu ku qaatay moolka. Waad akhrisan kartaa sheekada oo dhameystiran Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Markuu iPhone 6 Plus ka badbaado 54 maalmood badweynta hoosteeda
Mawduuca iPhone dijo
Sheeko wacan, waxaa ka maqnaa shisheeyaha.
Jawaab Mawduuca iPhone
Khamaarka ka hor iyo sluts.
Wixii sheekadu ka maqantahay waa waxtar, tag bogga hada socda.
Dhab ahaan, waxaad kaliya daabacdaa wax aan fiicnayn, qaar nuqul ah iyo dhajiye, dadku kama joogsadaan cabashada, walina waad isku mid tahay, ka dibna dadku waxay leeyihiin haddii aanaan jeclayn taas ma galno. Haddii aan cabanno, waxay ku saabsan tahay wax, iyo maalinta aan fiiro gaar ah u leenahay oo aanaan geli doonin, waxaad la yaabi doontaa sababta aadan hore u lahayn booqashooyin badan.
Warku waa been, wuxuu ku saabsan yahay suuqgeynta qarsoodiga ah, laakiin maadaama aysan waxba ku kala duwaneyn halkan, sidaas ayaan ku soconnaa.
Aniga waxay ila tahay udgoon in sheekadu ay tahay uun faafin qarsoodi ah. Laakiin ugu yaraan waa wax lala yaabo.